Maaskarada la Tuuri karo, Isticmaalka Caafimaadka ee Kn95mask, Facemask Anti Sust - EISEN
EISEN Warshadaha Xaddidan (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) waxay ku taalaa Tuulada Lianhu, Tangxia Town, Magaalada Dongguan oo leh gaadiid ku habboon, oo leh aag dhisme ka badan 5,000 oo mitir murabac ah. Waqtigan xaadirka ah, qalabka farsamada ee shirkadda waxaa ka mid ah: 10 khadadka isku dhafan ee otomaatiga ah, in ka badan 40 waji duubis caafimaad oo la tuuri karo & khadadka wax soo saarka otomaatiga ah ee loo yaqaan 'KN95 FFP2', shaybaar koronto oo dhameystiran, iyo sameynta koox aqoon-is-weydaarsi heer-sare ah oo aan lahayn bogsiiye 100,000-qof oo saddexaad ah, 10,000 -sheybaarka caafimaadka, iwm. Awood wax soo saar xoog leh iyo koox shaqaale ah oo si fiican u tababaran.
Tayada sare FFP3 NR maaskaro wajiga Earloop oo aan caafimaad ahayn
Maaskaro wajiga oo aan caafimaad ahayn oo FFP2 NR ah
5 waji xirmooyinka KN95 / FFP2 maaskaro wajiga oo aan caafimaad aheyn
5 waji maaskaro wajiga aan caafimaad ahayn oo loo yaqaan 'KN95'
3 Maaskarada wajiga ee lagu ilaaliyo
3 Maaskarada Wejiga Maaskaro ee La Isticmaali Karo
Nala soo xiriir si aad u hesho caawimaad dheeraad ah
Fadlan ku kalsoonow inaad na doorato, waxaan ku siin doonaa xalka ugu fiican.
Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka tayada qalabka caafimaadka ee ISO13485 & GMP, waxayna heshay liisanka wax soo saarka qalabka caafimaadka ee heer qaran, alaabooyinkeeduna waxay ka gudbeen shahaadada hay'adaha xirfadleyda ah ee gudaha iyo dibaddaba.
10 khadadka isku-xidhka otomaatiga ah, in ka badan 40 waji-gashi caafimaad oo la tuuri karo & khadadka wax-soo-saarka tooska ah ee loo yaqaan 'KN95', shaybaar koronto oo dhameystiran, iyo sameynta dhinac saddexaad oo la aqoon-saday aqoon-isweydaarsi aan lahayn boodh 100-000, sheybaar caafimaad oo heer 10,000 ah, iwm
Intee in le'eg ayuu maaskaradu socon karaa? Ma loo baahan yahay in la kaydiyo maaskaro? Sababtoo ah cudurka faafa ee cusub ee ku dhaca sambabka, ayaa wajiyadu xiran yihiin ku dhowaad nus sano.
032020 / Nofeembar
Fayraska cusub ee loo yaqaan 'Coronavirus' wuxuu isku beddelay Isbaanish si looga fogaado in lagu celiyo taariikhda. Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa furay Siyaasadda Xannibaadda Mar labaad coronavirus-ku isbeddel ayaa ka dhacay Spain Inta lagu jiro xilliga Halloween, sida laga soo xigtay TIMES, Britain ayaa u codeyn doonta Baarlamaanka asbuuca soo socda. Sababtoo ah faafida cudurka ...
Geng Shuang wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dagaalka Beesha Caalamka ay kula jirto Coronavirus-ka cusub, fadlan ixtiraam xaqiiqda, sayniska iyo kuwa kale. 20-kii Maarso, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Geng Shuang wuxuu shir gudoomiyay shir saxaafadeed caadi ah. Weriye ayaa weydiiyey, dhowaan, qaar ka mid ah aqoonyahannada reer galbeedka ayaa yiri ...